Web 2.0, Fiidiyowga | Martech Zone
Web 2.0, Fiidiyowga
Talaado, Febraayo 6, 2007 Douglas Karr
Tan ayaa lagu dhajiyay Problogger waana wax cajiib ah.
Haddii aadan fiidiyowga arkin, waad booqan kartaa goobta: KSU, Dhaqanka Dijital ah
Waan ka xumahay Xirfadlaha! iFilm wuxuu xayeysiiyaa Super Bowl Commercials
Feb 6, 2007 markay ahayd 11:31 PM
Wow, tani waa qeexitaan fiidiyoow oo wanaagsan oo ah Webka 2.0 Si aad u wanaagsan ayaa loo qabtay, borofisar!
Waa sidaas oo kale aniga la dhajiyay aniga "qeexitaankeyga" gaarka ah ee Webka 2.0 maanta (kahor intaanan arag fiidiyowgaan). Xaqiiqdii waan ku raacsanahay in Web 2.0 uu ku saabsan yahay isku xirka dadka, laakiin intaas wuu dhaafaa. Waa dimoqraadiyeynta internetka.